editor — Sun, 04/22/2018 - 00:53
हजार माइल पर
editor — Sun, 04/22/2018 - 00:49
हेर त म पत्थर भएको छु
तिम्रो स्पर्शको अभावले
बिस्तारै बिस्तारै म
जड हुँदै गैरहेको छु
पग्लनलाई त म हिउँ बन्नु पर्छ
तिमी घामको प्रकाश बन्नु पर्छ
shivraj kalauni5 — Fri, 04/20/2018 - 09:15
हे दाह्री !!
नकाटेमा साह्री !!
तिमी धन्य छौ दाह्री !!!
तिम्रो त विशेषता नै गजबको छ ।
कसैको फुस्रो दाह्री, कसैको चिल्लो दाह्री !!
कसैको नियास्रो दाह्री, कसैको हशिलो दाह्री कसैको कालो दाह्री, कसैको रातो दाह्री
कसैको घुमृएको दाह्री, कसैको सुम्लिएको दाह्री
॥ बिकिरण ॥ — Thu, 04/19/2018 - 23:19
अद्वितीय आकारको मेरो देशको झन्डा
अलग प्रकारको सस्कृती र सम्पदा
बिभिन्न जातजात्तिय भेषभुसाले सजिएको
प्राकृतिक जडिवुटिले वनजङल भरिएको
lbnepal — Thu, 04/19/2018 - 20:05
यात्रा मेरो कठिन सरहको
हरपल चन्द्र उदाउनै नसक्ने
गाउँछु गीत विलासै विलासको
कस्तो भाग्य सजाउन नसक्ने
ghayalme — Wed, 04/18/2018 - 02:04
महलमा नपुग्ने सफलमा हुँदैनन् ।
मुटू भित्र पीडा बढेको छ धेरै
नभन्नू न काँडा कमलमा हुँदैनन् ।
खराबी छ तिम्रै नजरमा र भन्छौ
मिठासै अरबको गजलमा हुँदैनन् ।
गोपीका बीच शंकर
dotpen — Tue, 04/17/2018 - 03:15
सबैका मनका प्यारा, स्यामा-श्याम छिपेर नी,
प्यारा उनी सबैका यी , हेरौँ के के हुँदै छ नी ।
हास्य सागर ठूला, छद्मभेषी निकै उनी ,
नारी पुरुष के हुन् , चिनिदैन कसै पनी ।
नारीको भेषमा कैले, उनैका भीडमा पसी,
लीला विविध गरेर, रमाउँछन् भनौँ कति ।
द्वापरमा पुगे एक, ती नारीरूप सुन्दर
रासलिला भए ठाउँ, गोपीका बीच शंकर ।
जोगीको भेषमा माग्ने, मन्दिरमा बसेर नै,
महात्मा पनि बन्नेनी, गुरु छेउ बसेर नै ।
स्नेह मिलन योगीको, आयोजना भयो जब,
बाटिका बीच सांखूको, सलम्बुमा गए सव ।
बनको बीच बाटैमा, देवीस्थान सलम्बुमा,
मेलम्ची पथको धूलै, धूलो पर्दछ मार्गमा ।
बाटैमा सुन्दरी आइन्, लिफ्ट मागिन् उनी सित,
साथैमा कारमा राखी हाँके गाडी खुसी सित ।
योगसाधक योगीले. कारमा सुन्दरी भनी,
नचिनेकी उनीलाई साथै राखी गुडे उनी ।
योगीको मनमा कैँयौँ , खेले कति कुराहरू ,
स्वर्गकी अप्सरा हुन् कि , गोपिनी श्यामकी भनु ।
इन्द्रकी उर्वशी हुन् कि, तपस्वीकै शकुन्तला,
गाडी रोकी किनी ल्याए, ख्वाए फोकेर सुन्तला ।
खाल्टाखुल्टी पथैमा नि, उफार्छ कारले घरि,
योगीको तन उफ्रेर, ठोकिन्थ्यो नि घरिघरी ।
सलम्बुको बनै भित्र, एकान्त बन बीचमा,
घुमीमाथि पुगेपछि, रोकियो कार चौरमा ।
पहिले आफु उत्रेर, ढोका खोलेर हातले,
हात जोडी झुकेर नै, उत्रन उनले भने ।
ढलल्क ठल्कँदै नानी, नारी बीच गई बसिन्,
झलक्क झल्कने रूपै, आकर्षण उनी बनिन् ।
बासन्ती बाटिका त्यही , थियो मिलन योगमा,
साधक साधिका धेरै , उमंग नाचगानमा !
उर्वशी नै उनी रैछन् , थालिन् नाच्न उनी पनि,
नाच्दानाच्दै लुगा फुस्क्यो, मूर्छै परे सबै अनि ।
बल्ल चिने सबैले नै , श्याम दाइ भनीकन,
छ शुभ कामना धेरै, कलाकार अझै बन ।
चैत्र १०, २०७४ ।
भो मलाई हिरा मोती चाहिदैन
tuladharbk — Mon, 04/16/2018 - 16:19
खोसेको चोली–धोती चाहिदैन ।।
पिउँदिनँ म बदनाम गर्नेलाई गर्न देऊ,
मन सपार्ने ओखती चाहिदैन ।।
editor — Mon, 04/16/2018 - 04:03
ए ! नयाँ वर्ष
वुद्दको देशमा बुद्धू धेरै भए
वक्ता हैन कर्ता चाहिएको छ
मानवीयता कैद नहोस्
सम्बन्ध कहिल्यै अवैध नहोस्
बहादुरलाई मूर्ख नबनाइदे
Prakash — Sun, 04/15/2018 - 14:31
फनफनी घुमायो मायाले
पिरतीको अवसर गुमायो मायाले
गरेकै हुँ जानेको जति
सोझो मान्छे, सक्कली पिरती ।।
चुर्लुम्मै डुबायो मायाले
एकजना एक्काइसौँ शताब्दीका सुटेकबुटेक मान्छेको मुखमा मासुको सानो टुक्रा अड्किएकाले, निकाल्नु परेकाले हस्पिटलमा जाँदा लाइनै बस्नु परेनछ । उनको कोट कालो थियो । ठूलो मान्छे सोचेर बेग्लै सम्मान भएको रहेछ, मान्छेको लामो भीडका बीचबाट १५० किलोको माला लगाएर भव्य स्वागत गरिरहेको स्पष्टै देखिन्थ्यो । त्यसपछि ती बुज्रुक पढालेखा मानिसले गोरुगाढामा चढेर रमाइलोसँग तराईको दृश्य नियालेको खबर पत्रिकाले पहिलो पानामा सचित्र छापिदियो । चिकेनलाई करेन्ट लगाइरहेको, तिनलाई समातेर त्यो मेसिनमा फालेको दृश्य देखेर उनी सेल्फी खिच्दै रमाइरहेका थिए । म छेउमा बसेर ती गोरुका पसिनाका धारा देखेर त्यो टट्यानपुर घाममा तिर्खाएका गोरुको वेदना सुन्दै थिएँ ।
शुभकामना - पचहत्तर सालको
dotpen — Sun, 04/15/2018 - 03:28
शुभ छ कामना धेरै, पचहत्तर साल भरी,
नरनारी सवै हामी, शुखी रहौँ सदैभरी।
प्रार्थना एक गर्दै छु, दीर्घायु बन मानव ,
योगमन्त्र बुझौँ हामी, नियमित गरौँ सव।
योगधारा अविच्छिन्न, निरन्तर बगी रहन्,
प्राणायाम निरन्तर्नै, श्वास धारा चली रहुन्।
editor — Sun, 04/15/2018 - 03:16
ओहो! कति स्वतन्त्र छस है तँ ? धर्तीलाई बलात्कार गरेर, सिङ्गो आकाश एक्लै ओढेर निर्धक्कका साथ निदाउन सक्छन् तँ ? तर सुन, यो धर्ती तेरो पनि हो, मेरो पनि हो । यी पाइलाहरू टेक्ने अधिकार तेरो पनि छ, मेरो पनि छ । हरेक दिन हिंड्दा अँध्यारो उज्यालो पार्ने त्यो आकाश तेरो पनि हो, मेरो पनि हो । शरीर तेरो पनि छ, मेरो पनि छ । यो समाज यो देश तेरो पनि हो, मेरो पनि हो । अस्तित्व तेरो पनि छ, मेरो पनि छ ।
हेर, बलात्कारी आज तलाई किन यसो लेख्दैछु सुन्दै जा । कान भए पनि बहिरो नबनेस् । आँखा भए पनि अन्धो नबनेस् ।
खै के नयाँ वर्षको शुभकामना दिनु
editor — Sat, 04/14/2018 - 22:33
अहिले झै लाग्छ ।
उनका छोरा खाडीमा ।
बुहारी अर्कैको गाडीमा ।
बुढीआमाको रोदन बेदना ।
सरकारले हेर्छु भन्थ्यो
पहिलाको नयाँ वर्षमा
फेरि नयाँ वर्ष आएछ
मृत्युपछिको मेरो जीवित अनुभव
लेकका हामी केटाकेटी
देश दुख्दाको ५ चोइटा
नजिक हुन खोजेथेँ तिमी टाढा भइदियौ
नबोले नि हुन्छ तिमी
बायाँटारीमा एक सुनौलो साँझ
दुई मुक्तक (तिमीलाई, भएँ)
अरु जस्तै नारी नै हौं मलाई जन्म दिने तिमी आमा
अनेसास कोलोराडोद्वारा भीमनीधि तिवारी सतबार्षिकी समारोह तथा साहित्य संगम सम्पन्न